Radotiana | Tohin'ny voan-dalana antsary avy any Dago - Nov 2008
« AF(o)RI(a)KA - Mivaivay tsy mety ho tony
Voan-dalana antsary avy any Dago - Nov 2008 »
This entry was posted on 14 Novambra, 2008 01:57 and filed under Ankapobeny .
22 Hevitra & 0 Verindrohy (trackback) amin\_'ny "Tohin'ny voan-dalana antsary avy any Dago - Nov 2008"
Manana karatra mena roa hono i T... fa aza matahotra ianareo an.
Nampidirin'i radotiana 14 Nov 2008, 05:41
Gravy be ilay teny mivadika !!!
Nampidirin'i Rasoa 14 Nov 2008, 09:35
hihihi! Tsy nihomehy indray aho raha tsy ilay karatra mena. Ohatry ny hafahafa be ny mahare hoe misy olon-dehibe lehilahy manana an'ireny koa. Toa tsy mba mahita mizara an'ireny mantsy aho ho an'ny vehivavy lehibe eto Tanà!!!.
Nampidirin'i latina 14 Nov 2008, 10:02
Rasoa njy ity lalin-tsaina an! ahola koa! lol Nampidirin'i news2dago 14 Nov 2008, 11:01
Rasoa => enao ity lalin-tsaina a! latina => Za ko mba manotany teny @ io Nampidirin'i news2dago 14 Nov 2008, 11:06
Gaigs zany hoy aho tamin'ny naheno azy voalohany. Ohatran'ny hoe nosainina lalina be nefa dia mety ho fifanandrifian-javatra.
Nampidirin'i radotiana 14 Nov 2008, 13:51
Latina, Ka tsy olon-dehibe anie i T... fa mbola bandibandy amin'ilay manaitaitra jôba kely ireny e :-) Ny sipany hono no nahazo an'io karatra mena io araky ny filazany. Maromaro no azony dia nangataka iray tany izy. Nampidirin'i radotiana 14 Nov 2008, 14:00
Asa na mety hahavaly ny fanontanianao ilay fanazavana hoan'i Latina eo ambony.
Nampidirin'i radotiana 14 Nov 2008, 14:06
Nahavaly tsara mihitsy e
Nampidirin'i news2dago 14 Nov 2008, 14:39
ary naninona no tsy nalainao ny revy eny bypass isaky ny week end alina sy ny zoma alina. tonga malahelo ny revy aty dago ianareo raha mahita anizany.
i masay ko efa vita mafinaritra be fa tsy tratranao.
Nampidirin'i haingo 14 Nov 2008, 17:46
Aleo mba ho ny hafa indray no hitatitra ny revy eny amin'ny bypass sy ny eny amin'ny Masay e.
Nampidirin'i Radotiana 14 Nov 2008, 21:32
aoka aloha :P
Nampidirin'i simp 15 Nov 2008, 15:01
Mba tsy zakako loatra ry Rado ny mahita ireo zaza marobe mifanisina eo amin'ireo dabilio. Manaiky ve ianao raha forwardevako any amin-dry zareo ao amin'ny Presidansa ny blaogi-nao azafady?
Misaotra indrindra fa mahafapo tokoa ny tatitra!
Nampidirin'i soanja 15 Nov 2008, 21:55
Tsy haiko ny hafa fa izaho ihany koa rehefa miantso zain avy aty dia tena 1 @ 4 no mahazo, hany ka tereko mampiasa orange daholo ny olona fiantsoko :))
Mahaontsa be mijery an'ilay zaza, firy @ireo re no hiditra ceg, dia firy no ho tonga lycée sy ho eny @ université?
Nampidirin'i maintikely 16 Nov 2008, 14:09
Efa nanery olona antsoiko matetika hampiasa madacom toa anao koa aho taloha. Nivadika indray anefa izy ity ny fandehany. Mety tsy hety hiova intsony ry zareo kou :-)
Firy amin'ireo ankizy ireo tokoa moa no ho tody eny amin'ny anjerimanontolo? ????
Efa hitany io fa aza manahy ianao Soanja. :-)
Nampidirin'i Radotiana 17 Nov 2008, 02:32
Izaho mpitatitra fotsiny an. Ry zareo mpikarakara no nanova an'io tsipelina io. Mety mba "cool" sady "catchy" angamba hono no antony :-)
Nampidirin'i Radotiana 17 Nov 2008, 03:37
Efa mitsidika ity blaogy ity zaho matetika. Misaotra manome vaovao avy any @ tanàna. Tena mahaliana ny fitantaranao azy!
Nampidirin'i Domoina 18 Nov 2008, 08:58
Misaotra mitsidika sady nankafy.
Nampidirin'i radotiana 18 Nov 2008, 20:49
Misaotra e!Am le nampitsiky! Nampidirin'i Bens 19 Nov 2008, 22:12
Tsy misy fisaorana ra-Bens a. Misaotra nametraka :-)
Nampidirin'i Radotiana 20 Nov 2008, 10:06
Tsara be ilay voan-dàlana an-tsary fa misaorta Rado a! Ilay tsy fahaterena sy havitsian'ny efitra fianarana moa dia olana goavana ao Mkara. 'Zany hoe tsara aloha rehefa manana finiavana hatrany ny ankizy sy ray aman-dreny e.
Iny teny avadka iny indray no tsy tato an-tsaiko lol.
Nampidirin'i Tokinao 22 Nov 2008, 14:53
Tsy misy tokony isaorana ny amin'iny kah. Mahafinaritra ny mizara izay nanaitra ny maso tany Dago. Efa manao ezaka ihany ny mpitondra raha ny fahitako azy saingy mila tosika avy amin'ireo izay tsara sitrapo ihany koa.
Nampidirin'i Radotiana 22 Nov 2008, 18:48